ရင်ထဲစို့လွန်းပြီး မျက်ရည်တောင် မကျနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ ချစ်သုဝေ – Cele Posts
ရင်ထဲစို့လွန်းပြီး မျက်ရည်တောင် မကျနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ ချစ်သုဝေ
ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်သုဝေကတော့ သူမရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို ယခုလိုထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်နော်။ ချစ်သုဝေက”ရင်ထဲကိုစို့နေတာပဲ..အမှောင်ကျတော့မယ့် တိုင်းပြည်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ် နေကြတဲ့ လူငယ်တွေ….
ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာက လာမယ်မှန်းမသိတဲ့ ကျည်ဆံတွေကိုတောင်မကြောက် စည်းလုံးပြီးလမ်းပေါ်ထွက်လာကြရှာရတာ😢
ကျွန်မတို့ အားကိုး ရမယ့် မောင်ငယ် ညီမငယ်လေးတွေ…စည်းကမ်းလည်းရှိ စည်းလည်း စည်းလုံးကြတယ်
ဒီတော့….ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ အနေနဲ့ CDM မှာပါဝင်ပေးပြီး ရုံးမသွားကြဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ် …
ရုံးမသွားပဲ အိမ်ထဲမှာ နေပေးရင်ကို လမ်းမပေါ်ထွက်နေရတဲ့ ပညာတတ် လူငယ်လေးတွေ ကို အပြန်အလှန် အားပေးရာရောက်တကို မမေ့လိုက်ပါနဲ့…..အားလုံးကို လုံခြုံနေစေချင်မိတာတော့အမှန်ပဲ..အထိရောက်ဆုံး ဖိအား ကို ထိရောက်စွာ ဝိုင်းဝန်းနိုင်ရင် ပညာသားပါပါ နိုင်ငံကို ကယ်တင်ရာရောက်မှာပါ🙏🙏🙏ရင်ထဲစို့လွန်းပြီး မျက်ရည်တောင် မကျနိုင်တာကြီးကွာ…လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ..”လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ပြထားပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Source:Chit Thu Wai’fb
ရငျထဲစို့လှနျးပွီး မကျြရညျတောငျ မကနြိုငျဘူးလို့ဆိုလိုကျတဲ့ ခဈြသုဝေ
ပရိသတျကွီးရေ ခဈြသုဝကေတော့ သူမရဲ့ရငျတှငျးခံစားခကျြတှကေို ယခုလိုထုတျဖျောပွောကွားလိုကျပါတယျနျော။ ခဈြသုဝကေ”ရငျထဲကိုစို့နတောပဲ..အမှောငျကတြော့မယျ့ တိုငျးပွညျအတှကျ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒဖျောထုတျ နကွေတဲ့ လူငယျတှေ….
ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောက လာမယျမှနျးမသိတဲ့ ကညျြဆံတှကေိုတောငျမကွောကျ စညျးလုံးပွီးလမျးပျေါထှကျလာကွရှာရတာ😢
ကြှနျမတို့ အားကိုး ရမယျ့ မောငျငယျ ညီမငယျလေးတှေ…စညျးကမျးလညျးရှိ စညျးလညျး စညျးလုံးကွတယျ
ဒီတော့….ပွညျသူ့ဝနျထမျးမြား အနနေဲ့ CDM မှာပါဝငျပေးပွီး ရုံးမသှားကွဖို့ အငျမတနျမှ အရေးကွီးပါတယျ …
ရုံးမသှားပဲ အိမျထဲမှာ နပေေးရငျကို လမျးမပျေါထှကျနရေတဲ့ ပညာတတျ လူငယျလေးတှေ ကို အပွနျအလှနျ အားပေးရာရောကျတကို မမလေို့ကျပါနဲ့…..အားလုံးကို လုံခွုံနစေခေငျြမိတာတော့အမှနျပဲ..အထိရောကျဆုံး ဖိအား ကို ထိရောကျစှာ ဝိုငျးဝနျးနိုငျရငျ ပညာသားပါပါ နိုငျငံကို ကယျတငျရာရောကျမှာပါ🙏🙏🙏ရငျထဲစို့လှနျးပွီး မကျြရညျတောငျ မကနြိုငျတာကွီးကှာ…လုပျရကျလိုကျကွတာ..”လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျမှာတငျပွထားပါတယျ။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော။
ဒီနေ့ထိ မည်သည့်သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်မှ မရှိသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ကနေ တရားဝင် နှုတ်ထွက်ကြောင်းပြောလာတဲ့ တိုင်ရွန်